Ithegi: iintloko | Martech Zone
Kutheni iipesenti ezingama-20 zabafundi kuphela beCofa kwiNqaku lakho leNqaku
NgoLwesithathu, Oktobha 28, 2020 NgoLwesithathu, Oktobha 28, 2020 Douglas Karr
Izihloko, izihloko zeposi, izihloko, izihloko… nantoni na ofuna ukuyibiza, zezona zinto zibaluleke kakhulu kuwo onke amaqhekeza omxholo owuhambisayo. Kubaluleke kangakanani? Ngokwale Quographicprout infographic, ngelixa i-80% yabantu ifunda umxholo, yi-20% kuphela yabaphulaphuli enqakraza. Iimpawu zetayitile zibaluleke kakhulu ekusebenziseni i-injini yokukhangela kunye nezihloko eziphambili ukuze umxholo wakho wabelane ngeendaba zosasazo. Ngoku ukuba uyazi iintloko zibalulekile, mhlawumbi uyazibuza ukuba uthini
Iingcamango ezi-6 zoHlahlo-lwabiwo mali loShishino oluNcinci
NgoMvulo, Oktobha 8, 2018 NgoMvulo, Oktobha 8, 2018 UJames mihla le
Sele uyazi ukuba awunawo uhlahlo-lwabiwo mali lokukhuphisana "namakhwenkwe amakhulu." Kodwa iindaba ezimnandi zezi: umhlaba wentengiso yedijithali ulinganise intsimi ngendlela engazange ibonwe ngaphambili. Amashishini amancinci anendawo yeendawo kunye namaqhinga asebenzayo kunye nexabiso eliphantsi. Enye yezi, ewe, ngumxholo wentengiso. Ngapha koko, inokuba yeyona ndleko iphambili kuzo zonke iindlela zokuthengisa. Nazi iindlela zokuthengisa umxholo
Ungazibhala njani izihloko eziThathela ingqalelo ukuba abantu baya kuthi bacofe kuzo
NgoMgqibelo, Disemba 31, 2016 NgoMgqibelo, Disemba 31, 2016 Douglas Karr
Izihloko eziphambili zihlala ziyinto yokugqibela ebhalwa ngumvelisi womxholo, kwaye ngamanye amaxesha abalufumani unyango olufanelekileyo. Nangona kunjalo, iimpazamo ezenziwe xa kwenziwa izihloko eziphambili zihlala zibulala. Nokuba lelona phulo liphumeziweyo lokuthengisa liya kuchitha isihloko esibi. Ezona zicwangciso zibalaseleyo zemithombo yeendaba kwezentlalo, amaqhinga e-SEO, amaqonga okuthengisa umxholo, kunye nentengiso-yokuqhafaza kwintengiso inokuthembisa into enye kuphela: Bayakubeka umxholo wakho phambi kwabafundi abanokubakho. Emva koko, abantu baya kucofa okanye cha
Indlela yokuBhala iTayitile eyenza abaTyeleli baYenze
NgoMgqibelo, ngoMeyi 7, 2016 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 Douglas Karr
Ukupapashwa kuhlala kunesibonelelo sokusonga iintloko zabo kunye nezihloko ngemifanekiso enamandla okanye iinkcazo. Kwindawo yedijithali, obo bunewunewu zihlala zingekho. Umxholo wakhe wonke umntu ujongeka ngokufana kwiTweet okanye kwiZiphumo zeNjini yokuKhangela. Kuya kufuneka sibambe ingqalelo yabafundi abaxakekileyo ngcono kunabo sikhuphisana nabo ukuze bacofe kwaye bafumane umxholo abawufunayo. Ngokomndilili, baphindaphindwe kahlanu abantu abaninzi bafunda umxholo njengoko befunda ikopi yomzimba. Nini
Qalisa ukuvavanywa kwe-A / B ngezi zinto zi-7
NgoMgqibelo, ngoJuni 13, 2015 Douglas Karr
Ukuvavanywa kuyaqhubeka ukungqinwa njengenye yeendlela eziphambili zalo naliphi na ishishini lokunyusa ukujonga, ukucofa kunye nokuguqula kwiwebhusayithi yabo. Ukwakha isicwangciso sovavanyo samaphepha okufika, ukubizela ezenzweni, kunye ne-imeyile kufuneka zibe kwiishedyuli zakho zentengiso. Iindaba ezimnandi? Phantse nantoni na inokuvavanywa ukuze isebenze! Iindaba ezimbi? Phantse nantoni na inokuvavanywa ukulungiselela ukusebenza. Kodwa eyona infographic yethu intsha ikubonisa iindawo ezimbalwa zokuqala. Ukutsiba kwi-A / B